Idebe ihe anya na onye o yiri ka a painstakingly ike ọrụ, adịghị ya? Ọ bụrụ na ị chọrọ nyochaa onye, ị ga-kasị eleghị anya, otu onye n'ime ndị na-esonụ ihe:
Splurge na ọnụ ikenkwucha ngwá
Iku ọnụ onwe nchọpụta
Soro ha gburugburu
Gaa ebe ha stof
Iju ajuju enyi ha
Ma ọ bụ, ị pụrụ nnọọ jidere ha ekwentị na-aga site na ya dị ka ị maara na ha na ekwentị bụ yikarịrị ebe ga-niile ozi gị mkpa.
Ma na ị maara na ihe fọrọ nke nta ime.
Ọfọn, ọ bụghịkwa ọzọ. With ExactSpy, kasị ike ekwentị nledo software, ị nwere ike nlekota oru ha ekwentị remotely na invisibly, n'ime nkeji na na na-eri nke a iko kọfị a ụbọchị!
Ọ anwansi? Emela, ọ bụ naanị n'ezie ọma na nkà na ụzụ na nke a bụ otú o si na-arụ ọrụ:
1. -Esi Amalite
Once you know that the phone you want to monitor is compatible with ExactSpy, ị pụrụ nanị mezue zụọ usoro. Find out how by checking out the How to Buy ExactSpy page.
After buying a ExactSpy subscription, ị ga-awụnye ya n'ime ekwentị na ị chọrọ nyochaa. You can find out about the simple installation process by going to the How to Install ExactSpy page.
2. Olee otú ọ na-arụ ọrụ
After installing ExactSpy, dum ekwentị data na uploaded jidesie anyị na sava. Ọ na-ewe ihe dị ka 30 nkeji maka oge mbụ. Mgbe nke ahụ mechara, ọ bụla ọhụrụ data melite na uploaded na ozugbo.
Gị dum mwube na mmasị, along with the target phone’s data is saved on the ExactSpy Server. Ọ na-achịkọta niile data si lekwasịrị ekwentị na uploads ya dị ka n'oge na-adịghị dị ka ọ bụla ọhụrụ ekwentị ọrụ na-ewe ebe.
Niile nlekota data, na ndekọ na nkọwa, enwere ike ịnweta ọ bụla oge m osisi n'ime otu uzo.
3. Olee otú Ejikwa
Ị nwere ike izipu iwu na otu uzo aka ịchịkwa lekwasịrị ekwentị, dị ka ndabere na ehichapụkwa ekwentị ụbọchị, kwusi ngwa.
The sava Tinyegharịa iduzi gị iwu ka lekwasịrị ekwentị maka ogbugbu.
4. Ndenye Tour
Login to ExactSpy to access all the monitored data. Tinye aha njirimara na paswọọdụ wee pịa 'ihe ịrịba ama na' na-anọgide na-.
The dashboard na-ekpughe na taabụ maka oku Ndekọ Njem, SMS Ndekọ Njem, Ozi ịntanetị, Geo ebe wdg. agafe na n'aka ekpe ihuenyo. Onye ọ bụla nwere taabụ nyochaa data uploaded si ekwentị metụtara mkpa atụmatụ.
Site na ịpị oku Ndekọ Njem, ị ga-enwe ike na-ele ndị niile oku ndia, na na kọntaktị aha, ọtụtụ ndị ọzọ na-nkọwa.
SMS Ndekọ Njem:
Site na ịpị 'SMS Ndekọ Njem', ị nwere ike ịlele niile ederede ndia megide ziri ozi na-erite aha, tinyere ụbọchị / oge.
Ị nwere ike ịlele niile ozi email na isiokwu, adreesị ozi ịntanetị, ụbọchị / oge na-aba na-ahụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-ekekọta tinyere email.
Na ndetu kọntaktị na-ekpughe niile zọpụta kọntaktsị na lekwasịrị ekwentị na aha, ọnụ ọgụgụ, adreesị ozi ịntanetị(bụ) na ndị ọzọ nọmba, ma ọ bụrụ na ọ bụla
Ọ bụla ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ bookmarked webpage gị lekwasịrị ekwentị nchọgharị pụrụ anya na ịga na nkọwa.
Ị nwere ike ịnweta dum nchọgharị Ịntanetị akụkọ ihe mere eme na ndị gara URLs na ụbọchị na ọnụ ọgụgụ nke nleta kwuru megide chọpụta npinye nile.
Ngalaba a nwere niile e dere oku na nkọwa nke ọ bụla oku mere ma ọ bụ natara na nyochaa ekwentị.
Ị nwere ike ịlele niile ịhọpụta na nkọwa mere gị lekwasịrị anya ná nkebi a.
Ị nwere ike ịlele niile foto echekwara na ekwentị lekwasịrị anya n'ụdị nke thumbnails. Ozugbo ị pịa gị họrọ oyiyi, ọ ga-emeghe ka a zuru-sized foto.
Lee, ị nwere ike ịlele niile video faịlụ uploaded si nyochaa ekwentị.
Niile music faịlụ ịchekwa n'ime gị lekwasịrị ekwentị na-uploaded ebe a.
The ugbu a geo ọnọdụ gị lekwasịrị ekwentị nwere ike hụrụ na mgbakwunye na a akụkọ ihe mere eme nke ha ọnọdụ GPS.
I nwere ike chọpụta dum ebe akụkọ ihe mere eme, tinyere adreesị na ndị ọzọ na-nkọwa nke gị lekwasịrị. Niile gara ọnọdụ na-pinpointed na weebụ map.
Lee ị nwere ike ịlele niile nkata mkparịta ụka na-eme na iphone Nkata iMessage
Lee, ị gbakwunye gị niile akpalite na kọntaktị na-arụsi ọrụ ike / deactive na kọntaktị, dabere na gị chọrọ.
Akpalite SMS Ndien Triggers ozi ịntanetị:
Ịnwere ike ịgbakwunye akpalite okwu n'ihi na SMS, ozi ịntanetị na adreesị email ebe a na-arụsi ọrụ ike / deactivate ha, dabere na gị chọrọ.
Ị pụrụ inye iche iche iwu ka lekwasịrị ekwentị site na nke a na ngalaba. Otu ọ dịla, atụmatụ ndị a anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike izipu ihe SMS iwu ka nyochaa ngwaọrụ ịrụ ndị ọrụ.
Akaụntụ na-ekwusi ike data maka njirimara gị profaịlụ. Ị nwere ike mfe ịgbanwe ozi ọ bụla si na nkebi nke a site na ịpị 'dezie'.
Bụrụ na nke ọ bụla gbara ajụjụ ma ọ bụ ọrụaka aka, nnọọ nyefere tiketi ma ọ bụ dee gị ajụjụ ke nyere ohere..
Ọfọn, you can get information from a cell phone. Enjoy!